ယူကရိန်းနိုင်ငံ စစ်တပ်စက်ရုံတစ်ခုတွင် သေနတ်သမား ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၅ ဦးသေဆုံး၊ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဒွန်ဘတ်စ်မြို့ရှိ ရှေ့တန်းကာကွယ်ရေးနေရာ၌ ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် နေရာများအား စစ်ဆေးနေသော သမ္မတ Volodymyr Zelensky အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၈ ရက်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Ukrainian Presidential Office/Handout via Xinhua)
ကီးယက်ဗ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Dnipro မြို့ရှိ စစ်တပ်စက်ရုံတွင် လူ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး အခြားသူ ၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိအောင် ပစ်ခတ်ခဲ့သော ယူကရိန်း အမျိုးသား လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ယူကရိန်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Denys Monastyrsky က Facebook လူမှုကွန်ရက်၌ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်၌ ရေးသားခဲ့သည်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အဆိုပါ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၄ နာရီခန့်၌ Yuzhny စက်ပစ္စည်းစက်ရုံ လုံခြုံရေးအဆောက်အအုံအတွင်းရှိသူများကို အကြောင်းရင်းမသိရှိရဘဲ ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်၌ ဝန်ထမ်း ၄ ဦးနှင့် အရပ်သား အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ အခြားသူ ၅ ဦးလည်း အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယူကရိန်းအာဏာပိုင်များက အခင်းဖြစ်ရပ်အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
Yuzhny စက်ပစ္စည်းစက်ရုံသည် ဒုံးကျည်လွှတ်တင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ဒုံးကျည်အင်ဂျင်များ၊ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များနှင့် ယူကရိန်း ကာကွယ်ရေးနှင့် လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုနည်းပညာကဏ္ဍများအတွက် အခြားသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ (Xinhua)
KIEV, Jan. 27 (Xinhua) — The police detainedaUkrainian National Guard serviceman who shot five people dead and wounded five others atamilitary factory in the eastern Ukrainian city of Dnipro, Ukrainian Interior Minister Denys Monastyrsky wrote on Facebook Thursday.
The 21-year-old soldier opened fire at people insideaguard house of the Yuzhny Machine-Building Plant at about4a.m. local time (GMT 0200) for unknown reasons.
Four servicemen and one civilian woman were killed in the incident and five other people were severely injured.
The Ukrainian authorities have launchedacriminal investigation into the incident, the minister said.
The Yuzhny Machine-Building Plant produces launch vehicles, rocket engines, ballistic missiles and other products for the Ukrainian defense and aerospace sectors. ■
Photo : Ukrainian President Volodymyr Zelensky inspects the positions of the Armed Forces of Ukraine at the frontline of defense in Donbass, eastern Ukraine, April 8, 2021. Ukrainian President Volodymyr Zelensky paidaworking trip to Donbass in eastern Ukraine due to the escalation of tensions in the region, the president’s press service reported on Thursday. (Ukrainian Presidential Office/Handout via Xinhua)